नेपालीको आयु ७१ वर्ष ! – mero sathi tv
नेपालीको आयु ७१ वर्ष !
On ५ चैत्र २०७४, सोमबार ०६:३८
नेपालीहरुको औषत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ ।
स्वास्थ्यका सूचकहरुमा उल्लेख्य सुधार आएसंगै नेपालीहरुको आयु ७१ वर्ष पुगेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण नेपालीहरु औषत आयु बढेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले स्वास्थ्य सुधारले नेपालीको औषत आयु वृद्धि हुदै गएको बताए ।
‘पाँच वर्ष अगाडी ६८ प्रतिशत रहेको नेपालीको आयु अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ, गिरीले भने, ‘यसको सम्पुर्ण देन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जान्छ । स्वास्थ्यमा भएको सुधारले नै नेपालीको आयु बढेको हो ।’ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालको स्वागत कार्यक्रममा गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका कारण नेपालीहरुको औषत आयु ७१ वर्ष पुगेको उल्लेख गरे । स्वास्थ्यमा भएका सुधारका सुचकहरु सार्वजनीक गरिएको थियो ।
औषत आयु घट्ने चिन्ता
स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचक यहि गतिमा अगाडि बढेको खण्डमा २०७५ सालमा नेपालीका आयु ७२ वर्ष पुग्ने छ । देशका सबै जिल्लाहरुमा बसोबास गर्ने नागरिकको औषत आयु एकै प्रकारको छैन । काठमाडौं बासीको औषत आयु ७९ वर्षको हाराहारीमा छ भने मुगु र बाजुराका जनताको औषत आयु ४९ वर्ष छ । देश संघियतामा गएको छ । ‘अधिकारीहरुले भनेका छन्, स्वास्थ्यका सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको छुट्टै निकाय नहुदा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धी गुम्ने खतरा छ । त्यसैले नेपालीको औषत आयु पनि ७१ बाट घट्ने होकी भन्ने चिन्ता छ ।’ मन्त्री अर्यालले भने सोचेर निर्णय लिने बताएकी छन् । स्वास्थ्य सुधार नभएसम्म अन्य क्षेत्रको विकास भएर अर्थ छैन । पहिलो स्वास्थ्य के हो राम्रो बुझ्नु पर्छ उनले भनेकी छन् ।
नेपालीको आयु बढ्नुको कारण
५ वर्ष मुनिको वाल मृत्युदर घट्नु
मातृ मृत्युदरमा सुधार
शिशु मृत्युदर घट्नु
स्वास्थ्य सेवा गुणात्मक तथा संख्यात्मक रुपमा सुधार
उल्लेख्य रुपमा सर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर हट्यो
शाक्षरतामा बृद्धि, सफा सुघरमा सुधार
खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा
विगत दुई दशकमा नेपालीमा फलफुल खाने क्रमको बृद्धि
संघीयतामा स्वास्थ्यको यस्ता चुनौती
स्वास्थ्य सेवाको पँहुच एवं उपभोगमा विद्यमान असमानता ।
किशोर किशोरी तथा जेष्ठ नागरिकका लागि उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा ।
भुइँचालोका कारण क्षति भएका स्वास्थ्य संरचनाहरुको पुननिर्माण ।
संघीयता कार्यान्वयनको सक्रमणकालीन अवस्थामा अविछिन्न रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु र स्वास्थ्यको उपयुक्त संरचना विभिन्न तहमा सुनिश्चित गर्नु ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कम्तिमा १० प्रतिशतको लगानी सुनिश्चित गर्नु ।
शहरी र ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रबीच स्वास्थ्य सेवामा विभेद हटाउनु ।
मुला खानुका ४ चमत्कारि फाइदहरु पढेर जान्नुहोस !!
यसरी बच्न सकिन्छ मौषम परिवर्तन हुँदै गर्दा संक्रमणबाट l जानिराख्नुहोस !